सडक र पुलको निर्माण गति कता ? - Pradesh Today सडक र पुलको निर्माण गति कता ? - Pradesh Today
सडक र पुलको निर्माण गति कता ?
मङि्सर १७, २०७५ सपना बोहरा
घोराही, १७ मंसिर । सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरुले सडक निर्माणको कामलाई तिव्रता दिएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुलाई आफूले जिम्मा लिएका निर्माणसम्बन्धी कामहरुलाई सम्पन्न गर्न गुज्रिसकेको म्यादमा थप भएकाले काममा तिव्रता गरेको देखाइरहेका छन् । सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीहरुलाई म्याद अवधिभित्र निर्माणका कामहरु नसकिए ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि कामले तिव्रता पाएको सडक कार्यालयले बताएको छ । घोराही तुलसीपुरमा चार वर्ष अघि निर्माण थालिएका चार लेन सडक निर्माणलाई पछिल्लो समय अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । सडक डिभिजन प्रमुख बद्रिप्रसाद शर्माले चारलेन सडकको निर्माणको काम तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको बताए । अहिले विकासले गति लिएको छ उनले भने, पुल तथा सडक निर्माणको ठेक्का लिएका कन्ट्रयाक्टरले थप म्यादमा पनि काम नसके ठेक्का तोडेर भएपनि काम अघि बढाइने छ ।
दाङका सडक तथा पुलहरुको निर्माणका जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरुलाई यो अन्तिम म्याद भएको डिभिजन सडक कार्यालय दाङले जनाएको छ । वर्षा अगाडि काम सम्पन्न नभएमा ठेक्का रद्द गर्न तयारीसमेत भएको छ । घोराहीस्थित निर्माणाधिन फोरलेन सडक दुई महिनाभित्र सकिने सम्बन्धित कन्ट्रयाक्टरहरु डिभिजन सडकको सम्पर्कमा आएर जिम्मा लिएका छन् । फोरलेन सडकको निर्माणको जिम्मा कान्छाराम र शंकर माली निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको छ । गुर्जे र बबई खोलाको पुल असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने म्याद थप भएको छ । गुर्जे खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा लिएका ब्रजगुरु कन्सट्रक्सन प्रालि र बबई खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा लिएका अनक–बज्रगुरु जेभीले असार मसान्तसम्म काम गरिसक्ने सडक डिभिजनलाई जानकारी गराएका छन् । तर कटुवाखोला र पत्रे खोलाको बाँकी काम शुरु नभएको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी दुर्गा गौतमले बताए ।
दाङका सडक तथा पुलहरुको निर्माणका जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरुलाई यो अन्तिम म्याद भएको डिभिजन सडक कार्यालय दाङले जनाएको छ । वर्षा अगाडि काम सम्पन्न नभएमा ठेक्का रद्द गर्न तयारीसमेत भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१ साल भदौ ११ गते कटुवाखोला र पत्रे खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा शंकरमाली निर्माण सेवाले लिएको थिए । कटुवा खोलाको पुलको काम आधाभन्दा बढी सकिदा पनि पत्रे खोलाको कुनै पनि निधो नभएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । पत्रे खोलाको डिजाईन पेश भएपछि त्यही आधारमा डिभिजन सडकले काम शुरु गर्न छ । ‘पत्रे खोलाको पुलको पहिले एक पटक सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले डिजाईन पेश गरेपनि त्यो गलत थियो’ डिभिजन सडकका सूचना अधिकारी गौतमले भने ‘सडकको नीति अनुसार डिजाईन पठाउन अनुरोध गरेपनि अझैसम्म कार्यालयमा पेश भएको छैन ।’ पत्रे खोलाको पुलको काम सम्बन्धित निर्माण सेवाले काम गर्ने हो वा होइन् कुनै निधो पनि नभएको उनले बताए । संग्राम खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा लिएका सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले फागुन मसान्त सम्पन्न गरिसक्ने जनाएका छन् ।
कटुवा खोलाको पुलको काम पनि दुई महिनामै सम्पन्न भईसक्नु पर्ने जनाएको छ । कटुवा खोलाको पुलको ढलाई गरेको तीन महिना बितिसकेको छ । सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले चाहने हो भने दुई महिनामा कटुवा खोलाको पुलको काम सम्पन्न भईसक्ने सूचना अधिकारी गौतमको भनाइ छ । पुलको मुख्य काम बिमको ढलान थियो, त्यो सकिसकेको छ । बाँकी काम भनेको पुलको छेउमा पर्खाल लगाउने र माटोले भर्ने काम हो । त्यो भएको छैन । फोरलेन सडकको डिभिजन सडक कार्यालय अगाडि बेस झार्ने काम भएको छ । ट्राफिक चोकमा रहेको फिनिसिङको काम बाँकी रहेको, सडक स्टक्चरको पूरै सकिएको छ भने कुनै–कुनै ठाउँमा नालाको ढक्कन हाल्न मात्र बाँकी रहेको छ । चैत मसान्तसम्म सडक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी गौतमले बताए । फोरलेन सडकको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको उनले बताए । सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरुलाई पटक–पटक समयावधि थप्दा पनि काम सम्पन्न नभएमा कानुनी कारवाही गरिने डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख बद्रिप्रसाद शर्माले बताए । ‘पहिलो चरणमा ठेकेदारले काम सक्नुपर्ने दोस्रो चरण क्षतिपूर्ति भराएर भए पनि ठेकेदारलाई काम सम्पन्न गराउनु पर्ने र अन्तिम चरणमा ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने नियम छ’ डिभिजन प्रमुख शर्माले भने ‘निर्माण व्यवसायीहरुको अवस्था र काम हेरेर ठेक्का रद्द हुन पनि सक्छ ।’
सुरक्षित घरमा लगानीको तुलना हुँदैनःमन्त्री चौधरी
रेडियो तुलसीपुर १८ वर्षमा
निःशुल्क बिमादेखि प्राविधिक शिक्षासम्म